Weerarkii lagu Qaaday Hoteel Dalka Mali ku yaal oo Lasoo Afjaray – STAR FM SOMALIA
Weerarkii lagu Qaaday Hoteel Dalka Mali ku yaal oo Lasoo Afjaray
Ciidamada dalka Mali ayaa soo gaba-gabeeyay weerar rag hubaysan oo Islaamiyiin ah ay ku qaadeen Hoteel ku yaallo Magaalada Sevare ee dalka Mali, kadib markii ragga hubaysan ay haystaan 24-saacadood.
Weerarkaasi waxaa ku dhintay 13-ruux oo shan ka mid ah yihiin Shaqaalaha Qaramada Midoobay ee dalka Mali shan kalena ay yihiin ciidamada dalka Mali.
Ciidamada ayaa waxa ay hareereeyeen Hoteelka, waxaana suuragashay inay gudaha u galaan, iyaga oo toogtay saddex ka mid ah raggii hubaysnaa ee Hoteelka dadka ku haystay, sidoo kalena waxaa gacanta lagu dhigay 7-ruux oo nolosha lagu qabtay lana xiray.
Saraakiisha ciidamada dalka Mali, ayaa waxa ay sheegeen in lasoo bad-baadiyay afar ruux oo ka tirsan Shaqaalaha Qaramada Midoobay, kuwaasi oo ku dhuumanaayay Armaajooyin dhexyaalla qolalka Hoteelka.
Ragga hubaysan ee Hoteelkaan weeraray ayaan la ogeyn Ururka ay ka tirsan yihiin, sidoo kalena ma jirto ilaa hada cid sheegatay masuuliyada weerarkaan.
Hawlgalka Qaramada Midoobay ee dalka Mali ayaa war ay soosaareen ku sheegay in ay weerarkaasi ku dhinteen labo ruux oo reer Ukraine ah, qof reer Nepalese ah iyo qof reer Koonfur Afrika ah.
Nin Udhashay Dalka Bangaladesh Oo Diinta Aflagaadeeyey Oo Wadankaas Lagu Dilay (Daawo Sawirada)
Dadka Haysta Diinta Masiixiyada Ee Syria oo Ka Cararaya Weerarada ISIS